Jose Mourinho oo ku hanjabey in uu qol mugdi ah ku xiri doono dhawr Cayaaryahan kulanka Tottenham | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jose Mourinho oo ku hanjabey in uu qol mugdi ah ku xiri doono dhawr Cayaaryahan kulanka Tottenham
(17-4-2018) Xiddigihii Manchester United ee sida liidaata u ciyaaray kulankii Axaddii ee West Brom ay guul-darrada u xambarisay ayaa sababsan doona seefta tababare Jose Mouirnho ciyaarta Sabtida ee semi-finalka FA Cup, taas oo ay iskaga hor iman doonaan Tottenham.
Red Devils ayaa Axaddii la kulantay guul-darro lama filaan ah kaddib markii ay West Brom oo ugu hoosaysa horyaalku ku dhufatay 1-0 iyagoo jooga garoonka Old Trafford, waxaanay taasi fursad u noqotay Manchester City oo horyaalka qaadatay iyadoo aan ciyaarin, balse haddii United ay badin lahayd ku khasbanaan lahayd inay hal kulan oo kale sii dagaallanto.
Guul-darradan ayaa waxa ka cadhooday tababare Jose Mourinho oo tibaaxay in qaar ka mid ah xiddigihii uu safay oo aan ka soo bixin waajibaadkooda uu ka tuuri doono shaxdiisa kulamada soo socda oo ay ku jirto ciyaarta Semi-finalka FA Cup ee Tottenham.
“Sida aad u ciyaarto ayuun baan ciyaartoyga ku xulan doonaa.” Sidaas ayuu yidhi Mourinho oo sidoo kale tibaaxay in aanu meel u haynin laacibiintii aan sida fiican u ciyaarin.
Mourinho oo digniintiisa sii wata, waxa uu yidhi: “Anigu hal qodob ayuun baan garanayaa: Waa sida aad u ciyaarto”
Laacibka khadka dhexe ee Ander Herrera ayaa uu Mourinho beddelay intii lagu jiray wakhtiga nasashada kulankii West Brom. Sidoo kale, Paul Pogba ayaa la saaray daqiiqaddii 58-aad.
Mourinho oo si gaar ah loo weydiiyey arrinta Pogba waxa uu sheegay inuu haystay kaadh digniin ah, halka uu ku jirayna ahayd meel xasaasi ah oo aanu xataa hal khalad geli kaynin, taas daraadeedna uu u saaray.